ယခု ၂၁ ရာစုမှာ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေး သုံးခု ရှိပါတယ်။ (၁) ကွမ်တမ် တော်လှန်ရေး၊ (၂) မော်လီကျူး ဇီဝဗေဒ တော်လှန်ရေး၊ (၃) ကွန်ပျူတာတော်လှန်ရေး တို့ပါပဲ။…
ကိုသန့်သည် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ပန်းတနော်အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်လက်တက်ရောက် ၍ အထက်တန်းပညာရပ်များကို ဆည်းပူးလေ့လာ ခဲ့သည်။…
3.Vacation responder အကွက်မှာ Vacation responder on ကို click လိုက်ပါ။ First Day အကွက်မှာက မိမိ စပြီ Responder လုပ်စေချင်တဲ့ Date ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ End မှာကတော့ …
မြန်မာပြက္ခဒိန် web service နဲ့ သူရိယသိဒ္ဓန္တ ဂြိုဟ်သွား web service…
င်္Flash songs တွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှကျေနပ်ပါမယ် ဆိုတဲ့သူများအတွက်…
အခုပဲ satellite ကနေ မိမိချစ်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူကြည့်လို့ ရပါတယ် ..…
Top 10 Best Hacking Site
10 Best Hacking Sites
1. Security Focus
insecure.org - nmap free security scanner, tools & h…
1 . Gamil ထဲကို ၀င်ပါ ..
ကျွန်တော်က တော့ connection နှေးနေချိန်မို့Basic HTML နဲ့ ဝင်ထားပါတယ်
Standard နဲ့ ဝင်ရင်တော့ မချို့ နေရာတွေ တော့ တူမှာမဟုတ်ဘူး ...…
Banned Wabsite တွေကိုဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း
ကျနော် ဒီpost ကို ရေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး... သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ပြောကြပါတယ်... " ban ထားတဲ့ website တွေကို Anonymous လုပ်ပြီး ၀င်ဖို့ ဘာခက်တာမှတ်လို့ ဒီလောက်လွယ်နေတာ " လို့ပြောပါတယ်... ဒီလို ကျော်ခွပြီးဝင်တာက မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနဲ့လည်း ယဉ်ပါးပြီးသားပါ... ကျနော်က အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး တင်တာတော့ …
အင်တာနက်သုံးသူတိုင် မသိမဖြစ်သိထားရမည့် ကီး မျုား
ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ တစ်ဆင့်ထဲရောက်မဲ့ နေရာကို နှစ်ဆင့် သုံးဆင့် ဘယ်သူမှ မသွားချင်ကြပါဘူး တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရင်တော့ လူပျင်းတွေပေ့ါ .. ( ဟဲ ဟဲ) အဲ့ဒါကြောင့် Window ကြီးမှာတောင် Shortcut Key တွေကို သုံးသေးတာပဲ .. Win+R လေးနှိပ် Run Box လေးထဲမှာ Shortcut လေးရိုက်ထည့်ပြီး ကိုယ် အသုံးပြုချင်တဲ့ A…
*မည်သည့်လတွင်မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက် မွေးသူများကို ၁ ဂဏန်းသမားများဟု
၁ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များက အချစ် မေတ္တာဟူသည် နှလုံးသားန…
ကယ်ပါ ဖတ်ပြီးမှ မကြိုက်ရင်ပြန်ပြော
လူတစ်ယောက်ဟာ ဆိုင်ကယ်စီးရင် လေတိုးသက်သာအောင်ဆိုပြီး အနွေးထည်ကို နောက်ပြန်ဝတ်တတ်သတဲ့။ တစ်နေ့တော့ အရက်မူးပြီး သူဆိုင်ကယ်မှောက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်မှောက်တဲ့နေရာကို ရဲတွေရောက်လာတယ်။…
သေသောသူသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသေသည်” ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဦးကျော်သူတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ စာရွက်မှာတော့ “သေသောသူသည် သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသင့်သည်” လို့ ရေးထားပါတယ်။…
ချစ်သူဘ၀ ရည်းစားဘ၀မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုပန်းပေးဖူးမယ် ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူပေးတဲ့ပန်း ရဖူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပန်းပေးတဲ့အခါမှာလည်း ပန်းကိုယ်စီမှာ အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုပန်းပေးတော့မယ်ဆိုရင် ပေးမယ့်ပန်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်လောက်တော့ သိသင့်တယ်ထင်လို့ အဘိဓာန်ပေါင်းစုံက ဖြတ်ညှပ်ကပ်လာတဲ့ အဓိပ္ပာယ်…
ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းနန်းတက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲတရုတ်သံတမန်တွေရောက်လာပါတယ် လက်ဆောင်တွေဆက်သနစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးအပြီးမှာ တရုတ်သံတမန်တွေကမြန်မာတို့ရဲကျောက်မြတ်ရတနာတွင်းတွေရှိတဲ့ ဖားကန်မိုးကုတ်မိုင်းရုးစတဲ့ဒေသတွေကိုငှားရမ်းလိုကြောင်း ရောင်းမယ်ဆို၇င်လည်းဝယ်ယုလိုကြောင်း လျှေက်တင်ကြပါတယ်…